Ikhaya STARS E-EUROPE Daley Blind Intsha Indaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba yeBhola Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "Scholletje Junior". Indaba yethu ye-Daley Blind yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo kusukela ebuntwaneni bakhe kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni, uxhumano lomndeni kanye namanye amaqiniso angabonakali ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngezinga lakhe elihlukahlukene. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abawazi okuningi mayelana ne-Daley Blind's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UDaley Blind wazalelwa ngosuku lwe-9th luka-Mashi 1990 e-Amsterdam, eNetherlands. Wazalwa nonina, uYvonne Blind nobaba uDanny Blind.
Indaba yethu yezingane eziphuphuthekile zeDaley yindaba yomfana osemusha futhi ohlakaniphile obala lapho ebelethwe ebonakala ephethe izakhi zofuzo ngethalente elingavamile sonke ngenxa kababa wakhe. Uyise, uDanny, wambeka esikoleni esamnika ithuba lokudlala ibhola lezemidlalo ngesikhathi sokudlala.
U-Blind waqala umsebenzi wakhe esikoleni se-youth club, Ajax, eqenjini elifanayo lapho uyise uDanny egama lakhe linguchwepheshe. Naphezu kwethonya likayise, uDaley wayesenalo ukuzimisela ngobuqotho ukwenza amaphupho akhe agcwaliseke futhi izifiso zakhe kwakungeyona nje into edlula.
Ngamazwi akhe ...
"Ubaba ongumngane wami omkhulu ukuzongena emidlalweni ebalulekile njenge-mascot yakhe ngesikhathi sokudlala kwakhe. Akazange angithengise amathoyizi noma imidlalo lapho ngisemncane, nje ibhola. Ngibonga kakhulu ngakho konke akwenzile. Wayehlala engicindezela njalo. Ngaphandle kwakhe, angizange ngibe nohambo oluhle kakhulu lapho ngisondela khona. '
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Umsebenzi wokufingqa
Phakathi kweminyaka eyi-5 kuya ku-8 (1995-1998), izimpumputhe zidlalwa i-AFC (Amsterdamsche Football Club) eyamnika isisekelo esihle sebhola. Esikoleni, wahlangana kahle nomqeqeshi osemusha u-Edwin Tielman, ubaba wakhe. Ngesinye isikhathi ukugcina indodana yakhe ibuke, uDanny wanquma ukubhalisa indodana yakhe esikoleni se-Ajax lapho eqeqesha khona.
Ukuba yindodana ka-Ajax ne-Netherlands legend uDanny Blind ngeke kube lula kunoma yimuphi umdlali webhola lezinyawo. Ukulindela okuphezulu kulandele njalo uDaley Blind nxazonke, futhi ekuqaleni kokusebenza kwakhe, kubonakala sengathi kungase kube nzima ukuhlangabezana nabo.
Ngethonya likababa wakhe, izimpumputhe zaqala umsebenzi ophumelelayo e-Ajax futhi zavuka ezinkampanini zentsha, zithola indawo ephezulu eqenjini. Kule nkathi lapho ubaba wakhe avuka khona ilungu lebhodi leqembu.
Njengomdlali osebenzayo, Isimpumputhe sidlala ngakwesobunxele, emuva kwephiko lesokunxele, emaphakathi-nendawo kanye nasemideni evikelayo. Uzibonele enqoba iziqu ezine ezilandelanayo ze-Eredivisie neqembu. Ngokuxhumana okuqinile kwebhola emndenini wakhe, kamuva uyise waba umqeqeshi womsizi waseNetherlands. Lokhu kuhambisana nesikhathi uDaley Blind athola umdlali wonyaka we-Ajax ku-2013, ngakho-ke uthola ucingo kusuka ULouis van Gaal umsebenzi weqembu likazwelonke.
Kwakuyizinsuku nje ngaphambi kweNdebe Yomhlaba ye-2014 ukuthi umngane kayise ULouis van Gaal uthole umsebenzi wakhe waseManchester United. U-Blr Snr wayengumqeqeshi womqeqeshi we-United ngesikhathi seNdebe yoMhlaba eBrazil futhi wayeqiniseka ukuthi wayenendima ekuhambeni kwendodana yakhe.
Ngonyaka nje emva komncintiswano ngokuqondile ngo-XNUMThu ka-Agasti 30, Manchester United wafinyelela esivumelwaneni ukuze asayine izimpumputhe. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ibhola liyisihlahla segolide, indawo lapho izigidi zobusha zithole umthunzi nothando. Ngaphambi kwayo yonke indoda enkulu, kukhona indodana enhle futhi kuleyo ndodana ikhona owesifazane omuhle kakhulu. Izimpumputhe eziyizimpumputhe zisebudlelwaneni besikhathi eside nesithandwa sakhe sase Candy-Rae Fleur.
I-Candy-Rae iyisibonelo nomdansa onamandla Qala kabusha okubandakanya ukudansa noRobin Thicke ematheni akwa-MTV EMA. Uvela e-Amsterdam futhi ufundela i-Hermann Wesselink College (isethi yokuqeqesha i-2007). Njengoba ikhasi lakhe le-LinkedIn libeka, manje usebenza njengomsebenzi wezokusakaza wezindaba.
Ayaziwa ukuthi laba bobabili baba ndawonye isikhathi esingakanani kodwa babheka othandekayo kakhulu esithombeni esingezansi.
Njengoba uDaley Blind ekubeka; "Ngizibona njengomuntu ovamile, futhi nathi, umbhangqwana ojwayelekile. Ngicabanga ukuthi ngezinye izikhathi kunzima intombi yami Candy-Rae ngoba ukuthandana nomdlali webhola lezinyawo okusho ukuthi unakekelwa kakhulu. Uthando empilweni yami uyangisekela kakhulu futhi ngizama ukumnikeza okufanayo. "
Naphezu kwendlela evamile yokuzifihla ekukhanyeni, i-Candy-Rae Feur iye yambulela ukuthi i-extrovertness ngokuletha iqembu lakhe lokudansa ukusekela isoka lakhe. Ukuba nesichotho sobuso esibizwa "Iqembu Lezimpumputhe" kwakuyindlela entsha yokukhombisa ukusekelwa komdlali we-Manchester United.
Njengokufanekiselwa ngezansi, iqembu lama-blondes amahle kanye nama-brunette konke kwakuboniswa nge-accessory yefashini "Ama-caps we-Snapback" abasebenzisa ekunakekeleni abalandeli njengoba behamba enkundleni.
Candy-Rae uthanda imfashini, kodwa ngeke ahambe yonke idokodo kuze kube semidlalo. Uvele eqinisekisa ukuthi ugqoke okuthile okubomvu nokusekelwa kwezwe, into eluhlaza njengoba kubonakala ngezansi.
Naphezu kokuba intombi yebhola, uBoty Rae akafuni ukubizwa ngokuthi yi-WAG. Kade wathi: "Angiyena u-WAG, angizizwa ngithanda intombi yomdlali. Ngenye indlela nxazonke! Ungumuntu womdansa! "
UFleur wanezela: "I-United yayo ayitholakali, wonke umfazi noma intombi izothola izithombe lapho zihamba khona. Lapho sise-Ajax futhi ngezinye izikhathi sonke sasihamba, kwakungakaze kube nomthwebuli wezithombe ezungeze.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
Uyimpumputhe unobungane kakhulu futhi uvame ukuzithola ehlangene nabantu abahluke kakhulu. Uyaziqhenya, uzimisele njalo ukusiza abanye, ngaphandle kokufuna ukuthola lutho. Ukuphila kukaDaley Blind kubonakala ngozwela futhi kuveza amandla omzwelo. Uzwela kakhulu futhi uthembekile kakhulu intombi yakhe, Candy-Rae Fleur.
Amandla Omuntu: Ungumuntu onesihawu, ubuciko, enembile, elula, ehlakaniphile futhi enomusa kakhulu kumculo wakhe intombi yakhe Candy-Rae Fleur.
Ubuthakathaka bomuntu siqu: Ungaba nokwesaba, ukuthembela ngokweqile, ukudabuka futhi unesifiso sokubalekela iqiniso.
Okuthandwa Ngu-Daley Blind: Ukuba yedwa no Candy-Rae Fleur, ukulala, umculo nokuthandana naye.
Okuthandwa ngu-Daley Blind: Abantu abathi bayazi-konke, begxekwa, okwedlule babuyela ekumdumeni nobudlova nganoma yiluphi uhlobo.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
U-Daley Blind uvela emlandweni womndeni osezingeni eliphezulu. Endlini eyimpumputhe, ibhola elibaluleke kakhulu. Kodwa indlu ayigcwele amahembe webhola njengoba beyizinsikazi ngaphezulu kunamadoda. Manje sethula wena amalungu omndeni wakwaDaley Blind.
Umama: Umama kaDaley Blind Yvonne Blind ufaniswa ngezansi nomyeni wakhe ngezansi.
U-Yvonne Blind uyaziwa njengomuntu owasiza indodana yakhe, uDaley ekuthutheleleni eManchester United. Ikhasi elimnyama likaYvonne Blind lichaza isikhashana lapho yena nomyeni wakhe bobabili behileleka engozini yemoto ku-2006. Omunye umuntu ohilelekile kule ngozi (isisulu) kwakudingeka aqedwe emotweni futhi athunyelwe esibhedlela.
Umyeni kaYvonne wathi ukudabuka: "Iqiniso lokuthi ngiye ngihlezi ngemuva kwesondo ngotshwala alikhoxeka futhi akufanele neze kwenzeke. Nginamahloni kakhulu futhi ngiyaqaphela ukuthi othile esimweni sami kufanele abe nomthwalo wemfanelo. Ukuthi lokhu akuzange kwenzeke kwenza isimo sibe buhlungu kakhulu. "
Abazali Abakhulu: Umkhulu kaDaley Blind uvela eHellevoetssluis. Ungumuntu owaziwa kakhulu kule Zeeland Isifundazwe saseDashiya sibonga ngomsebenzi wakhe ovelele embonini yamandla. Ugogo kaDaley Blind uvela Vlissingse, umasipala eNingizimu West Netherlands. Unomalume owaye wabona ubuhlungu ngokufa kwakhe ngengozi ye-moped.
SISTERS: U-Daley Blind unodade ababili abamangalisayo emanzini; I-Zola ne-Frenkie Blind.
Kusukela ekubukeni kwezithombe zabo, kubonakala sengathi uZola udala kunomfowabo futhi uFrenkie uncane kakhulu. UZola uyasiza futhi kumfowabo omncane.
Ubaba: Ngenxa yekhanda lekhaya, i-Soccer isalele umndeni womndeni wakwaMpumputhe. Uyimpumputhe uqala umsebenzi wakhe wobuchwepheshe njengomvikeli omuhle.
Uqale ngo-29 Agasti 1979 ebhola lezemidlalo e-Sparta. NgoJulayi 1986 Blind waya ku-Ajax, ngenxa yomqondisi wezobuchwepheshe Johan Cruijff. UDanny Blind wanqoba iziqu ezilandelayo phakathi nezinsuku zokudlala; I-Champions League (1995), i-European Cup II (1987), i-UEFA Cup (1992) neNdebe Yomhlaba (1995). Udlale imidlalo engu-537 enkulumweni yaseDutch futhi wenza izikhathi ze-45. UDanny wayefana nonyana wakhe uDaley ngesikhathi sokudlala.
UDanny uphathe amaqembu e-Eredivisie, i-Ajax ku-2005 ngaphambi kokuthatha indima ngohlangothi lukazwelonke lwesiDashi, ngaphansi UVan Gaal ku-2012. Ku-2017, waxoshwa njengomqeqeshi weqembu likazwelonke ngenxa yemiphumela embi. Wazalelwa e-East Souburg, uDanny wadlala uSparta Rotterdam, Ajax kanye neqembu laseDutch lebhola lebhola lebhola. E-Ajax, wathandwa kakhulu kangangokuba ibhodi yabaqondisi yamnika umsebenzi njengomqeqeshi futhi kamuva wamenza ilungu lebhodi.
UDanny Blind wayenomsebenzi omuhle wokuzivikela e-Netherlands. Nguye kuphela umdlali webhola webhola laseDutch ukuphumelela yonke imincintiswano yamaqembu ngamazwe ahlonishwa yi-UEFA neFIFA.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Uthandwe ngu Theresa Smalling
Chris Smalling once twitted mayelana unina uthanda Daley Blind ngaphezu kwakhe.
Ngesikhathi abalandeli bebonisa ukuthi ufana noDaley ngenxa yokusebenza okungalungile kukaChris Smalling, ukuphawula komuntu othile okwenzekile kubangele ukucasuka njengoba kuboniswe kwi-twit ngezansi.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Amandla Emisebenzi
Njengomdlali ovikelayo, Obofayo bayakuthanda ukuqeda ukudlala futhi basheshe bahlele ukuhlasela okusha emva kokuthola ifa. Njengengemuva ngakwesobunxele, kubonakala sengathi uyakwazi kahle ukuthi uzoqhubeka nini nokuthi uzohlala nini. Ukhiye kulokhu konke ukuqwashisa kwama-Blank's and intelligence.
Ngokuqondene namandla akhe, kuwukuthatha isenzo esifanele ngesikhathi esifanele.
Daley Blind Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukukhubazeka Kwemisebenzi
Kungase kuthiwe ukuthi uDaley Blind ungumdlali ovikelayo ongenamandla ngokoqobo ngokomzimba futhi engakwazi ukuqaliswa kahle, ikakhulukazi abashayeli abanamandla.
Lapho embona, omunye wayengaphetha ngokuthi ubheka kancane kancane buthakathaka. Njengokubuyiselwa emuva, ukungahambi kahle kwakhe kungabangela inkinga.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Daley Blind Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
Romelu Lukaku Ubuntwana Indaba Ngaphezu Untold Biography Facts